QM & Turkiga oo soo dhaweeyay soo celintii Xiriirka Somalia & Kenya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	QM & Turkiga oo soo dhaweeyay soo celintii Xiriirka Somalia & Kenya
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey Doorka Dowladda Qatar ka qaadatay soo-celinta Xiriirka Diplomaasiyadeed ee u dhexeeyey Dowladaha Somalia iyo Kenya.
War qoraal oo uu soo saaray Afhayeenka Xoghayaha Guud ee QM, Stephane Dujrik, waxa uu ku sheegay inuu Antonio Guterres muujiyey Rajadiisa ku aadan Baaqyadii ka soo kala baxay Dowladaha Somalia iyo Kenya ee Soo-celinta Xiriirkooda Diplomasiyadeed.
Qoralka ayaa lagu muujiyey inay Tallaabadaasi horseedi doonto inay labada dal si buuxda u soo ceshan doonan Xiriirkooda, oo lama huraan u ah Degananaashaha iyo Iskaashiga Mandiqadda Geeska Afrika.
Dhinaca kale, Dowladda Turkiga waxay bogaadisay soo-celinta Xiriirkii Diplomaasiyadeed ee Dowladaha Somalia iyo Kenya.
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Turkiga ayaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan arrintaasi, isla markaan ay ku qanacsan yihiin dadaalka ay Dowladda Qatar ku bixisay in horumar laga gaaro soo-celinta Heshiiska Somalia iyo Kenya
Qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay inay Dowladda Turkiga taageerayaan dadaalada lagu xlinayo Colaadaha ka aloosan Geeska Afrika, iyadoo loo marayo Wada-xaajood iyo Is-afgarad horseeda Heshiis Guud.
Dowladda Federalka ayaa waxay dhawaan ku dhawaaqday inay soo celiyeen Xiriirkii Diplomasiyadeed ee ay Kenya la lahaayeen, kaasi oo jarnaa tan iyo bishii December 15-dii ee sanadkii hore ee 2020-kii.
QM & Turkiga oo soo dhaweeyay soo celintii Xiriirka Somalia & Kenya was last modified: May 8th, 2021 by Admin